Madaxweyne Siilaanyo Oo Ka Qayb-galay Sannad-guurada 23-aad Ee Aasaaska Ciidanka Qaranka (SAWIRRO) - Somaliland Post
Home News Madaxweyne Siilaanyo Oo Ka Qayb-galay Sannad-guurada 23-aad Ee Aasaaska Ciidanka Qaranka (SAWIRRO)
Madaxweyne Siilaanyo Oo Ka Qayb-galay Sannad-guurada 23-aad Ee Aasaaska Ciidanka Qaranka (SAWIRRO)
(SL.Post) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Silaanyo Waxa uu maanta oo ay taariikhdu tahay 02.02.2017 ka qaybgalay , munaasibadda Xuska Sannad Guurada 23aad, ee Aasaaska Ciidanka Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo lagu qabtay Caasimada Hargeysa.
Madaxweynaha oo khudbad taariikhi ah ka jeediyey munaasibadaasi ayaa u dhignayd sidan:-
Milgo iyo maamuus weyn bay ii tahay, in aan maanta ka soo qayb galo, munaasibadda Xuska Sannad Guurada 23aad, ee Aasaaska Ciidanka Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland.
Madashan qiimaha badan, waxaan jecelahay, in aan hambalyo iyo bogaadin ballaadhan hawada u mariyo, dhammaan Ciidammada Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland.
Mar labaad, waxaan hambalyo u dirayaa, munaasabaddan ku aaddan, qoysaska Ciidanka Qaranka iyo shacbi weynaha Jamhuuriyadda Somaliland.
Sidoo kale, waxaan u ducaynayaa, dhammaan geesiyaashii u shahiiday, difaaca dalkooda hooyo, waxaan EEBE uga baryeyaa, in uu u dambi dhaafo, naxariistii janno ka waraabiyo.
Ummad kasta oo dunida ALLE ku oomay, waxa yool iyo abbaar u ah, in ay samaysato cudud iyo ciidan, ciiddeeda iyo calankeeda difaaca, oo lagaga cabsado.
Sidaa darteed, ujeeddooyinka la idin unkay, waxa kow ka ah, difaaca dalka, adkaynta amniga gudaha, iyo ilaalinta haybadda Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland.
Waxa hubaal ah, in aad tihiin halyeyada hirgeliyey, galladaa iyo gobonnimadaa aynu dugsanayno, ee dusheenna ka muuqata, ka-sokow, qaddarka iyo qubuulka ALLEHEENA WEYN.
Waxa hubaal ah, in xilka iyo waajibaadka idin saaran, yahay mid aan dhammanayn, oo waagii baryaba taagan.
Sidaa darteed, duco-qabayaal, waxa la idinka baahan yahay, in aad dedaalka sii laban-laabtaan, isla markaana heegan u ahaataan, habeen iyo maalinba, ilaalinta danaha guud, iyo u adeegidda dalkeenna iyo dadkeenna.
Waxaan idin leeyahay, halyeyadii Qarankow, ha daalina, duruufaha kala duduwanna u dul qaata, sidii aad horeba danta dalkiinna iyo dadkiinna ugu soo dibjirteen.
Waxaan idin leeyahay, duco-qabayaal, murtida tidhaahda: “Ragganimadu, waa inta reerkaaga ka soo hadha”.
Waxaan idin leeyahay, Ilaahay baa idinka abaal marin, ajar iyo xasanaadna idinka siin, ummaddinuna way idiin ogtahay kaalinta aad kaga beegantihiin, “Libaax nin galay, iyo nin galladayba og”.
Duco-qabayaal, xogogaal ayad ka tihiin, in Xukuumadda aan Madaxda ka ahay, ay juhdi badan gelisay dhismaha Ciidammada Qaranka.
Waxaa naga go’an, in aannu illaalinno qiimaha derajada Ciidammada Qaranka, isla markaana aan loo bixin nidaam ku dhisan siyaasad iyo dano gaar ah.
Si looga hor tago, ama looga feyjignaado, waxaannu diyaarinnay, Xeer lagu maamulo Derajada Ciidammada Qaranka. Xeerkaas oo hagaya, ama jaan goyen ku samaynaya, sida loo dallaco ama derajo loo helo.
Aniga oo ka duulaya Xeerka Derajada Ciidammada Qaranka, iyo soo jeedinta Guddigii Saraakiisha, ee Taliyuhu u magacaabay qiimaynta derajada Ciidanka Qaranka, waxaan maanta idinku bushaaraynaya, in aan dallacsiiyey Ciidanka Qaranka, gaar ahaan, Saddex-Xidgle iyo wixii ka hooseeya, dhamman min hal derajo.
Xeerka cusub ee derajada ciidammada loo sameeyey, wuxuu qeexaya in saddexdii sannadooba, hal mar la dallacsiiyo saraakiisha leh derajooyinka (Xiddig, Laba Xiddigood iyo Saddex Xiddigood). Tirada guud ee Ciidanka Qaranka maanta aan dallacsiinaya waxay dhan tahay 4393.
Mar kale, waxa sharaf ii ah, in aan si weyn u hambalyeeyo Ciidammada laga qarameeyey, Deegaammada Sool iyo Sanaag Bari, mujaahidiintaas oo xaqiijyey guulo wax ku ool ah.
Waxaan ugu bushaaraynaya geesiyaashaa iyo daraawiishtaa Ciidanka Qaranka ka tirsan, in ay naga go’an tahay in aannu deg deg u tayeyno, isla markaana aannu xurmo iyo xuquuq buuxda siin doonno.
Ugu dambayn, waxaan dhammaan Ciidammada Qaranka farayaa, in ay heegan buuxa galaan, isla markaana u diyaar garoobaan, ka qayb galka gurmaka iyo gargaarka loo fidinayo dadkooda abaaruhu tabaaleeyeen.